विराटनगरमा कांग्रेसको नगर सभापतिका ४ आकांक्षी, को कस्ता ? - Click BiratnagarClick Biratnagar
विराटनगरमा कांग्रेसको नगर सभापतिका ४ आकांक्षी, को कस्ता ?
विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी तथा कांग्रेसको जग मानिएको विराटनगरमा कांग्रेसको नगर सभापतिको लागि ४ जना सभापतिका लागि आकांक्षी देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिबेशन अन्तरगत शनिवार मोरङमा नगरगाउँ अधिबेशन हुँदैछ । अधिबेशनमा अहिलेसम्म विराटनगरमा मात्र आकांक्षीको संख्या ४ जना छ । भोली हुने निर्वाचनको लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ । विराटनगर महानगरपालिकाको नगर सभापतिको लागि विराटनगर–२ का दीपक चापागाई र अरुण न्यौपाने तथा विराटनगर ५ का सन्तोष न्यौपाने र विराटनगर ३ का कृष्ण कार्की सभापतिको दौडधुपमा छन् । नगर सभापतिको लागि उम्मेदवार बनाउन दलका शिर्ष नेताहरु नै लागेका छन् । आफु अनुकुलमा नेताको संरक्षणमा ४ जना सभापतिका आकाक्षीले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । उम्मेदवारी दिएका नेताहरु को कस्ता हुन् त ?
कांग्रेसको राजनीतिमा स्पष्ट र वैचारिक नेताको रुपमा चिनिएका नेता हुन् दीपक चापागाईं । नेपाल तरूण दल विराटनगरका नगर सभापति भएर काम गरिसकेका दीपकले ०४६ सालमा कांग्रेसको सदस्यता लिएका हुन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पु¥याएको गुरा“स पुस्तकालय बरगाछीका अध्यक्षसमेत भएर धेरै सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय चापागाईं सुशील कोइराला फाउण्डेसनका महासचिव पनि हुन् ।
महानगरको सभापतिको रुपमा अगाडि सरेका उनी अहिले कांग्रेसको शाख गिरेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसले जितेको महानगरपालिकाले गरेको काम जनताको पक्षमा देखिएन’ उनी भन्छन्, ‘नगरपालिका हावादारी कुरामा चल्यो, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको काम गर्न सकेन, महामारीमा जनताको मर्म बुझ्न सकेनौं ।’
विराटनगरको ऐतिहासिक विरासतलाई जोगाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको, कांग्रेसलाई अराजनीतिक भीड हुनबाट जोगाउनु पर्ने र युवाहरुलाई पार्टीमा आकर्षित गर्ने आफ्ना प्रमुख एजेण्डा रहेको उनी बताउँछन् । विराटनगर कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमि भएको भएपनि ०७४ को निर्वाचनमा संघीय संसदको तीनवटै क्षेत्र हारेको, २ वटा प्रदेशसभा संसद पदमा पनि हार व्यहोर्नु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थालाई उचाईमा लैजान आफ्नो उम्मेद्वारी महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । पुख्र्यौली सम्पत्ती र कलेजको लगानीबाट आउने आम्दानीले आफ्नो जीवन चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसको विराटनगर कार्यसमितिका कार्यबहाक सभापतिको रुपमा काम गरिरहेका अरुण न्यौपाने विराटनगरका स्थायी बासिन्दा हुन् । पुख्र्यौली कांग्रेसको विरासत बोकेका उनको विराटनगरमा फर्निचर व्यवसाय तथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी छ । त्यहीबाट खर्च गरेर आफूले राजनीति गरिरहेको उनी बताउँछन् । ०५२ सालदेखि पार्टीमा सक्रिय रहेको बताउने उनी भने विराटनगगर महानगरपालिकाको सभापतिका लागि प्रतिनिधिहरुको समर्थन आफूलाई रहेको बताउँछन् ।
विराटनगर स्थायी घर भएका सन्तोष न्यौपानेले पनि ४६ सालदेखि पार्टी सदस्यता लिएका हुन् । त्यसयता उनी निरन्तर नेविसंघमा रहेर काम गरे । अहिले पनि तरुणदलमा आवद्ध उनी नगरमा गुटउपगुट नराखी काम गर्ने बताउँछन् । नगरसभापति भएलगत्तै मेयरको रुपमा चर्चा भइरहेको प्रति उनले असहमति राख्दै आफू पार्टीगत राजनीतिमा लाग्ने तर जनप्रतिनिधि नबन्ने घोषणा गरे । तरुण दलको विराटनगर सभापति रहेका उनी नगरकै नेविसंघको दुई कार्यकाल सभापति बने । यस्तै तरुणदलको मोरङ सचिव भइसकेका उनी विराटनगर महानगरपालिकाको सभापति बन्नकै लागि अढाइ वर्षदेखि तयारी गरिरहेको बताउँछन् ।
राजनीतिलाई नै पेशा बनाइरहेका कार्की विराटनगरका स्थायी बासिन्दा बनेको धेरै भएको छैन । उनी १५÷१६ वर्ष अगाडिदेखि विराटनगरलाई मुख्य कर्मथलो बनाएका छन् । उनको आम्दानीको स्रोत देखिएको छैन । कक्षा १० मा अध्ययन गर्दै गर्दा २०५१ सालदेखि नै नेविसंघ पोखरिया स्कुल इकाईबाट राजनीति सुरु गरेका थिए । नेविसंघ जिल्ला सचिव, कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएभने नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सह महामन्त्री भएका छन् । सबै संग मिल्ने स्वाभावका उनी विद्यालयमा रहेको नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको सचिवको रुपमा उनी विद्यार्थीको साथमा हुन्थे । विद्यालय तहदेखि नै सहयोगी ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । विद्यालय ईकाई सचिव, विद्यालय ईकाई सभापति, महेन्द्र मोरङ क्यापस समिति उपसभापति, जिल्ला कार्यसमिति सदस्य, जिल्ला कार्यसमिति सचिव हुँदै नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रिय सहमहामन्त्री सम्मको जिम्मेवारीमा पुगे । उनी विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने अभियानमा पनि थिए ।
राजनैतिक अभियान संग संगै उनी सामाजिक अभियानमा समेत सक्रिय रहेका छन । भुकम्पको पुन निर्माण, बाढी – पहरोका पिडितहरुको उद्दार तथा राहत बितरण, कोरोनाको समयमा नागरिकको सेवामा उनी चिनिएका ब्यक्ति हुन् । उनले कोभिडको बेलामा नागरिकको उपचारको लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा संचालनमा ल्याएका थिए ।